Ubukumkani bokugqibela baseTshayina ukusuka ngo-1644 ukuya ku-1912
Igama elithi "Qing" lithetha "ukukhanya" okanye "kucacile" ngesiTshayina, kodwa i-Qing Dynasty yayiyinkosi yokugqibela yolawulo lwamaTshayina, elawula ukususela ngo-1644 ukuya ku-1912 kwaye lenziwe ngohlanga lwama-Aisin Gioro clan ukusuka kummandla waseNtshonalanga waseManchuria .
Nangona ezi zizwe zithatha ulawulo lobukhosi kwikhulu le-17 leminyaka, ekuqaleni kwekhulu lama-20, abalawuli be-Qing babethatyiswa ngamagunya angaphandle, asemaphandleni kunye nobuthathaka bempi.
I-Qing Dynasty yayingakhange iqineke-ayizange ivuselele yonke i-China ukuya ngowe-1683, emva kweminyaka engama-9 emva kokuthatha igunya ngokusemthethweni eBeijing kunye noMbusi wokugqibela, u- Puyi oneminyaka engama-6 ubudala, wabhalwa ngoFebruwari ka-1912.
Inkosi yaseKing yayingundoqo kwi-East nakwi-mpuma ye-Asia kunye nobukhokeli ngexesha lolawulo lwayo, lwaqala xa amaqela kaManchus atshabalalisa ukugqibela kwababusi be-Ming kunye nokulawula ukulawula iChina. Inkalo enkulu yeChina yokulawula ubukhosi, i-Qing yamkhosi ibambelele eMpuma yeAsia emva kokugqibela ikwazi ukuhlanganisa lonke ilizwe phantsi kolawulo lwe-Qing ngo-1683.
Ngexesha elininzi kweli xesha, i-China yayinamandla amakhulu kuloo ndawo, kunye neKorea, iVietnam kunye neJapane bazama ukubeka amandla ekuqaleni kolawulo lwe-Qing. Nangona kunjalo, ngokuhlasela kweNgilani kunye neFransi kwiminyaka ye-1800 yokuqala, ubukhosi beQing kwafuneka baqale ukuqinisa imida yawo nokukhusela amandla avela kumacala amaninzi.
I- Opium Wars ye-1839 ukuya ku-1842 kunye no-1856 ukuya kwe-1860 nayo yabhubhisa amandla amaninzi aseKing eChina. Umntu wokuqala wabona i-Qing ilahlekelwa ngamajoni angaphezu kwe-18 000 kwaye ivelise izibuko ezintlanu ukuya eBritish ngelixa i-sibini inikezelwa ngamalungelo angaphandle kwiFransi naseBrithani kwaye yabangela ukuba kufike ama-30,000 ama-Qing.
Asekho yedwa eMpuma, i-Qing Dynasty kunye nokulawula komkhosi e-China kwakuya ekupheleni.
Ngowe-1900, iBrithani, iFransi, iRashiya, iJamani kunye neJapane sele iqalile ukuhlasela ubukumkani, ukuseka ummandla wonxweme lwayo ukuze kuthathe ulawulo phezu kwentengiso kunye nemikhosi yempi. Amandla angaphandle aqala ukuthatha iindawo ezininzi ezingaphandle kwiiQing kunye neQing kufuneka izame ngokukhawuleza ukugcina amandla alo.
Ukwenza izinto zibe lula kancinci kumlawuli, iqela labahlali baseTshayina babambelela i- Boxer Rebellion kumazwe angaphandle kuma-1900 - okokuqala ekuchasene nentsapho elawulayo kunye neengongelo zaseYurophu, kodwa kwafuneka bahlangane ukuze ekugqibeleni baphonse abahlaseli bamanye amazwe kunye uthathe indawo ye-Qing.
Ngethuba leminyaka ka-1911 ukuya ku-1912, intsapho yasebukhosini yenza ukunyanzela amandla, ukumisa umntu oneminyaka engama-6 ubudala njengombusi wokugqibela wase-China oneminyaka eyiwaka lamawaka. Xa i- Qing Dynasty yawa ngo-1912, yaphawula ukuphela kwalo mlando kunye nokuqala kweRiphablikhi kunye nomthetho wezenhlalakahle.
Ubume beSihlalo kaMao Zedong
Yayiyintoni i-Han Dynasty?
Indlela yokubhala hiragana: ra, ri, ru, re, ro - ら, り, る, れ, ろ
Iimpawu zeKrisimesi zaseJamani
Imithetho elishumi yokukhusela i-Gun
Ukhuseleko lwezeNtlalo luyazisola ngeSazisi ukuHlaba
'Isitishi elinesibhozo' nguEmily St. John Mandel - Imibuzo Yemibuzo
I-American Settler Colonialism 101
Uthande I-Latte Yakho? Funda iMbali yeCafesi
Los lugares más tourados e Estados Unidos
Ukujonga ngokugqithiseleyo 'Inqaku leMoya' nguMark Twain
Isimo sezulu sase-Iran